CANAB "MUSCAT DIEVSKY": SHARAXAADA KALA DUWAN, MUUQAALKA MIRO, ASTAAMAHA IYO SAWIRADA - BEERTA
Natiijada muuqaalka ah ee taranka hiwaayadda: "Muscat Dievsky"
Noocyada canabka ah ee caleenta ah ayaa si gaar ah loogu caanbadeeyay rootiilaha.
Ma aha oo kaliya inay ku qanciyaan rabitaanka macaamilka, laakiin sidoo kale waxay u adeegaan sida qalabka wanaagsan ee loogu talagalay qamriyada qaarkood.
Iyadoo loo marayo taranta muddada dheer, noocyada qaar ee waxsoosaarka ayaa la heli karaa beerashada xitaa dhexda dhexe ee xaaladaha cimilada ee isbeddela, mid ka mid ah waa Muscat Dievsky.
Muscat Dievsky wuxuu loola jeedaa qaabka cuntada ee canab cad, taas oo caan ku ah Bisaylkiisa hore.
Ubaxa noocyada kala duwan waa bisexual iyo, sida Panther iyo Aladdin, uma baahna pollination dheeraad ah.
Noocyada kale ee Muscat waxaa ka mid ah Muscat Hamburg, Muscat Summer iyo Muscat Bely.
Buundada Diev Muskat waa caddaan, oo leh buuxda boodh caleemo huruud ah. Isugeynta miisaankeedu waa 17-20 garaam, oval qaab ah, oo u dhow qaabka loo yaqaan 'ovoid'.
Dhadhanka miro ayaa ah mid iswaafaqsan, oo leh qabsasho aan ciriiri lahayn. Berry leeyahay maqaarka cagaarka ah, taas oo aan ku dhowaad dareentay markii la wada baabbi'iyey, iyo hilibka aan fiicnayn. Xataa qaar ka mid ah sanooyin aan fiicnayn, berry ma u nugul digir;
Qaybaha qaabka furan, aad u ballaaran, oo leh dhexdhexaad dhexdhexaad ah. Miisaanka mid ayaa gaari kara 600-800 g. Beerta waxaa lagu qabtaa si adag waxayna si fiican u qaadaan;
Geedka canabka ah ayaa si fiican u raraya, ugu yaraan 2/3 ee dhererka oo dhan, iyo duurka u caan baxeen koritaanka weyn. Gooyn si dhakhso ah xidid iyo waxay ku habboon yihiin rootstocks badankood;
Caleenta waa wareegsan, yar yar oo la xakameynayo, hoose ayaa leh maqaarka oo yaraada.
Canab Sawir "Muscat Dievsky":
Canabkaani waa natiijada xulashada hiwaayadda ee A.A. Goluba, kaas oo lagu helay in lagu naqshadeeyo Atlanta Zaporozhye oo leh noocyo kala duwan ee manka si loo helo 2008.
Kala duwanaansho waxay ku xiran tahay foomamka hore ee bislaadayXilliga sii kordhaya ilaa berry ah si buuxda u bislaadaan waa qiyaastii 115-120 maalmood. Xaaladaha dhexe ee suunka, dalagga ayaa laga goyn karaa badhtamaha bisha August.
Waxaa ka mid ah noocyada hore ee Bisaylkiisa loo yaqaan Kishmish 342, Julian iyo Gordey.
Wax-soo-saarka ayaa aad u sarreeya.
Gooyo waxaa lagu sameeyaa celcelis ahaan 4-6 indhood, halka si looga hortago in ka badan culeyska geedka, waxaa lagama maarmaan ah in si caadi ah loo goosto beergooyska.
Baaxadda ugu fiicnaanta ee warshad horay loo sameeyay ayaa ah 45-50 indhood. Gooyo gaaban ayaa lagu sameeyaa 2-4 bog.
Kala duwanaanshuhu waa mid aan qabyo ahayn oo hor istaagi kara xaaladaha cimilada.
Calaamado isku mid ah ayaa leh Aleshenkin Dar, Delight Perfect iyo Giovanni.
Cadaadiska barafka waxaa lagu hayaa heer caadi ah oo waa -23000S marka ay ku koraan xaaladaha aan muuqan.
Ka dib markii Bisaylkiisa, berry wuxuu joogi karaa baadiyaha waqti dheer, iyada oo aan lumin muuqaalka iyo dhadhanka.
Beeraha Diev Muskat ayaa leh maqaar macaan oo aan u ogolaaneynin in uu waxyeelo dalagga. Si loola dagaallamo cayayaanka kale (caarada caarada, caarada), waa ku filan in la fuliyo tallaabooyin ka hortag ah, oo ay ku jiraan:
Kormeer taxadar leh nidaamka xididka geedo ka hor intaadan iibsan. Tani waxay ilaalin doontaa dhirta mustaqbalka laga bilaabo guuldarada caleenta cagaaran, taas oo loo wareejiyo goobta ku yaala xididdada geedka canabka ah;
Dhirta khafiifinta iyo sameynta nidaam hawleed oo mug leh. Nashaadyada noocan oo kale ah ma aha oo kaliya ka hortagga dhacdooyinka caleen iyo caarada, laakiin sidoo kale waxay gacan ka geysaneysaa in si dhakhso ah loo ogaado cayayaanka iyo cudurrada soo ifbaxay;
Kala saarista iyo burburinta qaybo cayayaan ah oo canab ah, iyo weliba caws. Ka takhalusidda caleemaha saameeya ayaa ka hortagi doona cayayaanka iyo cudurrada ka sii faafaya, iyo caleemaha ka hortaga cayayaanka ayaa ka hortagi doona cayayaanka in ay u wareejiyaan canab.
Waxaa lagu gartaa iska caabin dheeraad ah ee cudurada fangas: in cawska, cawska iyo jeexdo heerkulka 3.5-4 dhibcood. Inkastoo ay tani tahay, buufinta ka hortag leh ee diyaarinta nafleyda ka hor inta ubax iyo ka hor inta aan la aasaasin berry ayaa loo baahan yahay. Hawlaha noocan oo kale ah waxay ka hortagi doonaan cudurrada suurtagalka ah waxayna caawiyaan ilaalinta dalagga mustaqbalka iyada oo aan waxyeello u geysan dhirta iyo ninku
Sidoo kale, ha ilaawin ka hortagga cudurada sida anthracnose, chlorosis, bacteriosis, rubella iyo kansarka bakteeriyada. Faahfaahin dheeraad ah ka sii akhri qodobada kala duwan ee boggayaga.
Muscat Dievsky waa qaab rajo leh oo loo yaqaan 'viticulture home'. Ma aha oo kaliya u adkaysta dhammaan noocyada cudurada, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay berry aad u ballaaran oo leh dhadhan isku dhafan. Foomkani wuxuu ku habboon yahay bilowga kuwa ku cusub viticulture, iyo kuwa jecel in ay cunaan.
Ma aha beeralayda khibrad leh sidoo kale waxay ku talin karaan noocyo kala duwan Galben Nou, Charlie iyo Augustine.
Gacaliye qaali ah! Ka soo tag fikradahaaga ku saabsan kala duwanaanta canabka Muscat Dievsky ee faallooyinka hoos ku qoran.